कस्ता व्यक्तिमा गर्न मिल्छ कपाल प्रत्यारोपण? कति लाग्छ खर्च? :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
रिता लम्साल बुधबार, फागुन ५, २०७७, ०८:११:२६
काठमाडौं–‘ओहो ! तिम्रो त अगाडीको भागमा कपाल नै छैन त !’ टाउको त तक्लु हुँदै गएछ।’ भेट्ने वित्तिकै साथीहरुले हालखबर समेत नसोधि टाउकोमै नजर लगाउदा कपाल झरेर तालु खाली भएका व्यक्तिहरुको अनुहार पक्कै खुम्चिन्छन्।
यस्तै समस्याबाट आजभोली धेरै युवाहरु पीडित छन्।
‘तिम्रो कपाल कति पालतो हुँदै गएछ। पहिला त राम्रो थियो।’ कपालकै विषयलाई फोकस गरेर साथीहरुले कुराकानी सुरु गर्दा युवतीहरुको मन पनि खिन्न हुन्छ होला।
त्यसैले पनि हेर्दा आकर्षक र सुन्दर कपाल होस् भन्ने चाहना महिला पुरुष दुवैमा हुन्छ। तर, कपाल झर्ने समस्याले कतिपय युवाहरुको तालु खाली हुँदै जान्छ। यस्तै युवतीहरु पनि कपाल टुक्रिने, झर्ने समस्याले चिन्तित भइरहेका हुन्छन्।
चिकित्सा तथा प्रविधिको युगमा यस्ता समस्या सामान्य बन्दै गएका छन्। त्यसैले कपाल झर्ने समस्याबाट चिन्तित नै भएर बस्नुपर्ने अवस्था नभएको ह्याम्स अस्पतालका छाला तथा कपाल प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डाक्टर कमल राज धिताल बताउँछन्।
स्वास्थ्यखबरको कार्यक्रम स्वास्थ्य संवादमा कुराकानी गर्दै डा धितालले समयमै कपाल झर्नुको कारण पत्ता लगाइ सोही अनुसारको उपचार गर्दा कपाल जोगाउन सकिने बताए।
डा धितालका अनुसार कपाल प्रत्यारोपण गरेर खाली भएको तालुमा फेरि आर्कषक र सुन्दर कपाल उमार्न सकिन्छ।
कपाल झर्ने तथा नपलाउने समस्या किन हुन्छ? के कपालसँग सम्बन्धित समस्याहरु हाम्रो शारीरिक स्वास्थ्य समस्यासँग जोडिएको हुन्छ? कपाल झर्ने समस्या रोकथामका लागि के गर्ने? कस्तो अवस्थामा कपाल प्रत्यारोपण गर्न मिल्छ? प्रत्यारोपणको लागि कति शुल्क लाग्छ? लगायतका विषयमा कार्यक्रम स्वास्थ्य संवादमा डा धिताल कुराकानी गरेका छौं।
प्रस्तुत छ डा धितालसँग गरिएको भिडियो संवादः